Carlo Ancelotti Oo Iska Diiday Kooxda Chelsea Si Uu U Leeliyo Napoli – Gool FM
(Napoli) 15 Maajo 2018. Wararka laga helayo gudaha dalka talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaadeen maanta oo Talaado ah in madaxweynaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis uu wali xiriir la sameenayo Carlo Ancelotti si uu kala hadlo shuruudaha heshiiska.
Wargeyska Corriere della Sera ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in saraakiisha kooxda Napoli ay si joogta ah xiriir ula sameenayaan Carlo Ancelotti si uu kaga soo dhaqaaqo meesho uu joogo.
Dhinaca kale wargeyska ayaa wuxuu sheegay in sidoo kale Chelsea ay xiriir la sameeneyso Carlo Ancelotti, sidoo kale kooxda Tottenham ayaa qeyb ka ah kooxaha raacdada ugu jira saxiixa Carlo.
Laakiin Aurelio De Laurentiis ayaa aaminsan inuu leeyahay awooda uu Carlo Ancelotti ugu qancin karo imaatinka kooxda Napoli xili ciyaareedka soo aadan,
Corriere della Sera ayaa wuxuu intaas hadalkiisa kusii daray in heshiiska Carlo Ancelotti uu ku imaanayo kooxda Napoli uu gaarayo mudo hal xili ciyaareed uu sidoo kale kusii darsan karo sanad kale hadii uu go’aansado inuu sii joogo.
Difaacayaasha Koobka Adduunka ee Germany oo ku Dhawaaqay Horudhaca Cayaartoyda u Mataleysa tartanka…xili uusan Qeyb ka aheyn …..?